The MagSafe Duo wuxuu ku dhici karaa suuqa 21-ka Diseembar | Waxaan ka socdaa mac
Teknolojiyadda 'MagSafe' waxay ahayd mid ka mid ah sheekooyinka xiisaha leh ee ay Apple soo bandhigtay iyada oo ay weheliso jiilka cusub ee iPhone-ka ee sannadkan, teknoolojiyad u oggolaanaysa ku hagaaji iPhone saldhiga lacag bixinta si aan uga fogaanno in aan subaxdii kacno oo aan is aragno iyadoo lala yaaban yahay in aan la rarin maadaama ay wax yar dhaqaaqday.
Tikniyoolajiyaddan, Apple waxay soo bandhigtay qalab taxane ah oo isugu jira qaab kiis iyo boorsooyin. Laakiin marka lagu daro, waxay sidoo kale soo bandhigtay saldhig laba geesood ah oo ka faa'iideysanaya tikniyoolajiyaddan. Waxaan ka hadlaynaa MagSafe Duo, saldhig lacag-bixin oo noo oggolaanaya si wada jir ah u soo dallacaya taleefannadeenna iPhone iyo Apple Watch.
Saldhiggan lacag-bixinta, oo qiimahiisu yahay 149 euro, weli wuu socdaa suuqa lagama heli karo, laakiin sida laga soo xigtay dukaanka tafaariiqda ee Swiss, waxay imaan kartaa 21-ka Diseembar, markaa haddii aynaan awoodin inaan ka faa'iideysanno Black Friday ama Cyber ​​Monday si aan u iibsanno hadiyadeena kirismaska, nasiib ayaan yeelan karnaa.
Digitec Galaxus (via Apple Insider), Dukaanleyda Swiss-ka ah ayaa horeyba u aqbalay boos celis loogu talagalay MagSafe Duo laakiin ma noqon doonto illaa iyo bisha soo socota ee Diseembar 21 markay bilaabi doonaan rarka, ugu yaraan sida lagu dhawaaqay. Hada, Apple Store wali ma keydin karnoIn kasta oo haddii taariikhdaasi sax tahay, waxay u eg tahay in usbuuca soo socda durba aan fursad u heli doonno inaan keydinno.
Waa in la xusuusnaadaa in lacagta 149 ee sicirka saldhigga, waa inaan ku darnaa xeedho, maadaama aan lagu darin. Haddii aan rabno inaan ka qaadno labada iPhone iyo Apple Watch awooddooda ugu sarreysa, waa inaan iibsannaa xeedho ka sarreeya 20W, maadaama haddii kale iPhone ay ku dallaci doonto 11W oo aan ahayn 15W haddii saldhigga lacag-bixinta ee MagSafe uu u oggolaado inaysan waxaa ka mid ah taageerada Apple Watch.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » MagSafe Duo wuxuu ku dhici karaa suuqa 21-ka Diseembar
Sida loogu daro podcasts khaaska ah Apple Watch